ယခုလအတွက် အကောင်းဆုံး ဘုရားယတြာ….နယုန်လဆန်း(၁) ရက်နေ့ ( ၂၂ .၅ .၂၀၂၀ ) မှ နယုန်လကွယ်နေ့( ၁၉.၆.၂၀၂၀ )အထိ – Shwe Likes
နယုန် လဆန်း ( ၁ ) ရက်နေ့ ( ၂၂ .၅ .၂၀၂၀ ) မှ နယုန် လကွယ်နေ့( ၁၉ . ၆ .၂၀၂၀ )အထိ တစ်လတာလုံး
မိမိ အိမ် ဘုရားကျောင်း ဆောင် ရှိ မြတ်စွာ ဘုရားရှင် အား “ ပန်းကန်ပြား တစ်ချပ်ပေါ် တွ င် အဝါရောင် အဝတ်စ ကို ဖြန်းခင်းထားပြီး ထိုအဝါရောင် အဝတ်စပေါ်တွင် သီးသန့် ပန်းအိုး( သို့ ) ဖန်ခွက်သစ် ဖြင့်
သပြေညွန့် – (၆) ညွန့် နှင့်
ကံ့ကော်ညွန့်— (၂) ညွန့် တင်ထား ကပ်လှူ ရပါမယ် မိတ်ဆွေများ ခင်ဗျား….။
ဆွမ်းတော် အဖြစ် ငှက်ပျောသီး ကပ်လှူ ကြပါ။
အောက်ပါ ဂါထာတော်ကို ( ၁၃ ) ခေါက်တိတိ ရွတ်ဖတ်ပေး ရ ပါ မယ်
” ဥုံ ပထဗျာ အာကာသေ ပဗ္ဗတေစေဝ
ဥဒကေ ဝနေ ယံယံ ပတ္တံ ပဝါဒေမိ
သဗ္ဗ လာဘသိဒ္ဓိ ဥပတုံမေ။ ”
နယုန်လ တစ်လ တာအတွင်း ကိုယ်ရော စိတ်ပါကျန်းမာ ချမ်းသာရပါလို၏ ။ မိမိလိုရာ ဆုတောင်းနိုင်သည် ။ မည်သည့်နေ့နံသား မဆိုလုပ်ဆောင်နိုင်ပါကြောင်း။
သပြေညွန့် နှင့် ကံ့ကော်ညွန့်များ ညိုးနွမ်းလာပါကစွန့် ၍ အသစ်ပြန် လည် လှဲလှယ် ကပ်လှူ ပေးရမည် ။
ဤယတြာ အစီအရင်သည် အလွန် အစွမ်းထက်ထိရောက်သောကြောင့် ယုံယုံကြည်ကြည်လုပ် ပါက နယုန်လတစ်လတာလုံး စီးပွားလာဘ်လာဘ ပွင့်လန်းစေပြီးမည်သည့် အခက်အခဲများ မဆို ကောင်ခြင်းမင်္ဂလာနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေသား ။
၇ ရက်သားသမီးများ အားလုံး ကြီးပွားချမ်းသာကြပါစေ…
ဗေဒင်နှင့်အထူးယတြာပေးပညာရှင် ဆရာပေါက်ကျိုင်း 09776478912
နယုနျ လဆနျး ( ၁ ) ရကျနေ့ ( ၂၂ .၅ .၂၀၂၀ ) မှ နယုနျ လကှယျနေ့( ၁၉ . ၆ .၂၀၂၀ )အထိ တဈလတာလုံး
မိမိ အိမျ ဘုရားကြောငျး ဆောငျ ရှိ မွတျစှာ ဘုရားရှငျ အား “ ပနျးကနျပွား တဈခပျြပျေါ တှ ငျ အဝါရောငျ အဝတျစ ကို ဖွနျးခငျးထားပွီး ထိုအဝါရောငျ အဝတျစပျေါတှငျ သီးသနျ့ ပနျးအိုး( သို့ ) ဖနျခှကျသဈ ဖွငျ့
သပွညှေနျ့ – (၆) ညှနျ့ နှငျ့
ကံ့ကျောညှနျ့— (၂) ညှနျ့ တငျထား ကပျလှူ ရပါမယျ မိတျဆှမြေား ခငျဗြား….။
ဆှမျးတျော အဖွဈ ငှကျပြောသီး ကပျလှူ ကွပါ။
အောကျပါ ဂါထာတျောကို ( ၁၃ ) ခေါကျတိတိ ရှတျဖတျပေး ရ ပါ မယျ
” ဥုံ ပထဗြာ အာကာသေ ပဗ်ဗတစေဝေ
ဥဒကေ ဝနေ ယံယံ ပတ်တံ ပဝါဒမေိ
သဗ်ဗ လာဘသိဒ်ဓိ ဥပတုံမေ။ ”
နယုနျလ တဈလ တာအတှငျး ကိုယျရော စိတျပါကနျြးမာ ခမျြးသာရပါလို၏ ။ မိမိလိုရာ ဆုတောငျးနိုငျသညျ ။ မညျသညျ့နနေံ့သား မဆိုလုပျဆောငျနိုငျပါကွောငျး။
သပွညှေနျ့ နှငျ့ ကံ့ကျောညှနျ့မြား ညိုးနှမျးလာပါကစှနျ့ ၍ အသဈပွနျ လညျ လှဲလှယျ ကပျလှူ ပေးရမညျ ။
ဤယတွာ အစီအရငျသညျ အလှနျ အစှမျးထကျထိရောကျသောကွောငျ့ ယုံယုံကွညျကွညျလုပျ ပါက နယုနျလတဈလတာလုံး စီးပှားလာဘျလာဘ ပှငျ့လနျးစပွေီးမညျသညျ့ အခကျအခဲမြား မဆို ကောငျခွငျးမင်ျဂလာနှငျ့ ပွညျ့စုံကွပါစသေား ။
၇ ရကျသားသမီးမြား အားလုံး ကွီးပှားခမျြးသာကွပါစေ…
ဗဒေငျနှငျ့အထူးယတွာပေးပညာရှငျ ဆရာပေါကျကြိုငျး 09776478912
အဖေတွေက သားသမီးတွေကို ဒါတွေကြောင့် ပညာတတ်ဖြစ်စေချင်တာပါ….ဖတ်ကြည့်ပါ
၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာ ပထမဆုံးအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ဖျားပိုင်းကို ဖြတ်ကျော်မည့် နေကြတ်ခြင်း